Kênh phân phối là gì? Các loại hình kênh phân phối phổ biến nhất hiện nay | Anybook.vn - Anybook
Kênh phân phối là gì? Các loại hình kênh phân phối phổ biến nhất hiện nay | Anybook.vn
Eo amin’ny sehatry ny fandraharahana, ankoatry ny famoronana vokatra manara-penitra mifanaraka amin’ny tsiron’ny mpanjifa, ny orinasa dia mila mandinika ny fantsona fizarana vokatra. Fantaro bebe kokoa momba ny fantsona fizarana miaraka amin’ny 123job eto ambany!
Fantsona fizarana dia singa manan-danja amin’ny paikady ara-barotra mifototra amin’ny vokatra rehetra izay manampy amin’ny fanatratrarana ny mpanjifa amin’ny fomba izay mampitombo ny fidiram-bola ary manampy ny mpanjifa hahita ny marikao. Ny fantsona fizarana dia mamorona tombony ho an’ny mpanamboatra sy ny mpanjifa rehefa te hianatra na hampiroborobo ny vokatra izy ireo. Noho izany Inona no atao hoe fantsona fizarana? Inona no anton-javatra tian’ny orinasa hampivelatra ny fantson-drano ilainy?
1 I. Inona no atao hoe fantsona fizarana?
2 II. Fantsona fizarana malaza amin’ny varotra
2.1 1. Fantsona fizarana mivantana
2.2 2. Fantsona fizarana ankolaka
2.3 3. Fantsona fizarana maromaro
3 III. Ny fiantraikan’ny fantsona fizarana amin’ny orinasa
4 IV. Fantaro hoe inona no andraikitry ny fantsona fizarana?
4.1 1. Miaraka amin’ny mpanamboatra
4.2 2. Miaraka amin’ny mpanjifa
5 V. Fanambarana ny paikadin’ny fampivoarana ny fantsona fizarana ho an’ny orinasa
5.1 1. Fantaro ny fantsona fizarana mety
5.2 2. Famakafakana ny mety ho mpanjifa
5.3 3. Tombanana ny fahombiazan’ny asa ary ampifanaraho haingana amin’ny fiovana
6 SATRIA. Ahoana no hamantarana sy hifidianana ny fantsona fivarotana tsara?
7 VII. Eo am-pamaranana
I. Inona no atao hoe fantsona fizarana?
Inona no atao hoe fantsona fizarana? Fantsona fizarana dia fitambarana fikambanana sy olon-tsotra mifampiankina miasa amin’ny asa famokarana miaraka amin’ny tanjona farany hitondra ny vokatra tsara indrindra ho an’ny mpanjifa. Ny fikambanana rehetra mandray anjara sy ny olon-tsotra ary ny karazana fantsona fizarana dia antsoina hoe mpikambana ao amin’ny fantsona. Indraindray ny fantsona fizarana dia ny mpanamboatra mivantana mivarotra vokatra amin’ny mpanjifa nefa tsy mandalo mpanelanelana, indraindray ny fantsona fizarana dia tsy mivantana, miova imbetsaka ny vokatra alohan’ny hahatongavana amin’ny mpanjifa. Ireo mpisehatra eo amin’ny mpamokatra sy ny mpanjifa dia antsoina hoe mpanelanelana fizarana. mpanelanelana amin’ny fizarana in fantsona fizarana ankolaka mety ahitana:
Mpivarotra ambongadiny/ Mpizara: mpanelanelana amin’ny fizarana eny an-tsena na mpivarotra eny an-tsena.
Mpivarotra: Mpanelanelana mividy vokatra avy amin’ny mpanamboatra ary mivarotra izany amin’ny mpanelanelana hafa na amin’ny mpanjifa indostrialy.
Mpivarotra: mpanelanelana mividy vokatra avy amin’ny mpanamboatra na mpivarotra ambongadiny ary avy eo mivarotra mivantana ny vokatra amin’ny mpampiasa farany.
Solontenan’ny mpanamboatra: mpanelanelana manana zo hisolo tena ny mpanamboatra hivarotra vokatra amin’ny mpanelanelana, saingy tsy manan-jo hanana vokatra.
Consultant: mpanelanelana izay manoro ny vokatra avy amin’ny mpanamboatra mankany amin’ny mpivarotra.
Inona no fiasan’ny fantsona fizarana? Fantsona fizarana Tafiditra ao anatin’izany ny hetsika rehetra atao amin’ny fihodinana, izay mampifandray ny vokatra avy amin’ny mpanamboatra sy ny mpanjifa aorian’ny fizotran’ny famokarana sy alohan’ny fanjifana.
Ny fantsona fizarana dia singa manan-danja amin’ny paikady ara-barotra rehetra
Hijery misimisy kokoa: Inona no atao hoe varotra? Ny fahatakarana ny varotra amin’ny fitantanana manokana ny fantsona fizarana vokatra
II. Fantsona fizarana malaza amin’ny varotra
Channels fizarana ampio ny mpanamboatra handrakotra ny tsena amin’ny fitondrana vokatra any amin’izay ilain’ny mpanjifa. Ny mpanamboatra dia takiana amin’ny fandaminana ny fizotry ny famandrihana sy ny fanaterana, miasa ho toy ny tetezana eo amin’ny mpanamboatra vokatra sy ny mpanjifa mampiasa vokatra, manampy ny mpanamboatra hanao tsara kokoa amin’ny fikarakarana mpanjifa. Fantsona fizarana dia fitaovana fikarohana momba ny tsena izay manampy ny mpanamboatra hisambotra ny tsena mba hahatakarana ny filana sy ny tanjon’ny mpanjifa momba ny vokatra.
READ Đại lý là gì? Các loại hình đại lý và đặc điểm của chúng | Anybook.vn
Ankoatra izany, ny fantsona fizarana mbola mila fampahalalana momba ny milina fikarohana amin’ny mpifaninana, dia toerana iray hanehoana ny vokatra mety ho an’ny mpanjifa hisafidy, amin’ny anaran’ny mpanamboatra hanome tolotra ho an’ny mpanjifa toy ny consulting, fanohanana ara-teknika, fitarihana vokatra… Amin’ny tombony Amin’izao fotoana izao, mizara ny fantsona fizarana amin’ny Marketing karazana telo: fantsona fizarana mivantana, ankolaka SY fantsona fizarana maromaro. Miankina amin’ny filana sy ny fahaiza-manao ary ny tanjon’ny orinasa tsirairay manangana fantsona fizarana SY fitantanana ny fantsona fizarana mety.
1. Fantsona fizarana mivantana
fantsona fizarana mivantana Karazana fantsona fizarana izay ny mpandray anjara dia ny mpanamboatra sy ny mpanjifa ihany. Ny entana vita dia hozaraina mivantana amin’ny mpanjifa tsy misy mpanelanelana. Fantsona fizarana mivantana: P (mpamokatra) -> C (mpanjifa).
2. Fantsona fizarana ankolaka
Fantsona fizarana ankolaka mizara ho sokajy roa:
Fantsona fizarana nentim-paharazana: Ny vokatra aorian’ny famokarana dia hozaraina araka ny filaharan’ny mpanamboatra amin’ny alàlan’ny mpanelanelana fizarana ary farany amin’ny mpanjifa, indrindra indrindra:
Fantsona fizarana tokana: Mpanamboatra => Mpivarotra => Mpanjifa,
Fantsona fizarana roa ambaratonga: Mpanamboatra => mpivarotra ambongadiny, mpivarotra ambongadiny => mpivarotra => mpanjifa.
Fantsona fitsinjarana ambaratonga telo: Mpanamboatra => bait => mpivarotra ambongadiny/ambongadiny => mpivarotra => mpanjifa.
Fantsona fanapariahana maoderina: Hivondrona ireo mpanamboatra sy mpanelanelana amin’ny fitsinjarana mba hamoronana fitambarana iray. Ny vokatra vita dia hozaraina mivantana avy amin’ny vondrona mankany amin’ny mpanjifa. Ny tombony amin’ny fizarana maoderina noho ny fizarana nentim-paharazana dia ny fitsitsiana ny fotoana sy ny saran’ny fitaterana.
3. Fantsona fizarana maromaro
Fantsona fizarana maromaro manana tombony amin’ny fanampiana ireo orinasa mitahiry ny vidin’ny dokam-barotra, fa ny orinasa dia tsy maintsy mandoa komisiona ho an’ny mpanelanelana amin’ny fizarana.
Jereo koa: Inona no atao hoe Strategy? Mianara hevitra sasantsasany mifandraika amin’ny paikady ara-barotra
III. Ny fiantraikan’ny fantsona fizarana amin’ny orinasa
FANAPAHAN-KEVITRA fifantenana fantsona fizarana Amin’ny maha-iray amin’ireo fanapahan-kevitra manan-danja indrindra amin’ny raharaham-barotra, ity safidy ity dia hisy fiantraikany avy hatrany amin’ny fanapahan-kevitra rehetra momba ny fanentanana ara-barotra, ny loharanon-doka, ny varotra, ny fitantanana ny masoivoho. Ny tombom-barotry ny orinasa dia hiankina ary mifandray mivantana amin’ny orinasa mampiasa fantsona fizaranaAhoana. Job manangana fantsona fizarana dia miankina amin’ny anton-javatra maro ny fandraharahana, anisan’izany ny tontolo iainana lafin-javatra, ny kolontsaina orinasa, ho avy fampandrosoana fironana ny orinasa sy ny tsiron’ny mpanjifa.
READ Cricket – Bóng gậy là gì? Cách chơi và những hình thức chơi phổ biến | Anybook.vn
Ny safidy ny fantsona fizarana dia misy fiantraikany lehibe amin’ny orinasa
Hijery misimisy kokoa: Ny fizotran’ny drafitry ny varotra: toro-làlana ho an’ny vao manomboka
IV. Fantaro hoe inona no andraikitry ny fantsona fizarana?
Ny fantsona fizarana vokatra dia tsy manampy ny mpanamboatra ihany fa mitondra tombontsoa maro ho an’ny mpanjifa, indrindra:
1. Miaraka amin’ny mpanamboatra
– Manampy amin’ny fandrakofana ny tsena amin’ny fizarana vokatra amin’ny mpanjifa sahirana.
– Miasa ho tetezana eo amin’ny mpanamboatra sy ny mpanjifa mampiasa ny vokatra.
– Fitaovana iray hanampiana ny mpanamboatra vokatra hisambotra ny tsena (misambotra ny filan’ny mpanjifa sy ny vaovao, ny filan’ny mpifaninana).
– Manohana ny mpanamboatra hikarakara tsara kokoa ny mpanjifa amin’ny sehatry ny serivisy: fikojakojana, fiantohana, torolàlana momba ny vokatra, …
2. Miaraka amin’ny mpanjifa
Ny asan’ny fantsona fizarana ny entana mpanjifa dia manampy ny mpanjifa hahita ny vokatra ilainy foana.
– Ampio ny mpanjifa afaka misafidy tsara ny vokatra. (Toerana fizarana maro ihany koa no manoro sy manohana ny mpanamboatra amin’ny anaran’ny vokatra).
Jereo koa: Zavatra tokony ho fantatra alohan’ny hianarana marketing mitambatra avy amin’ny A -> Z
V. Fanambarana ny paikadin’ny fampivoarana ny fantsona fizarana ho an’ny orinasa
Ny rafitra fitsinjarana dia loharanon-karena ivelany manan-danja amin’ny orinasa. Mety haharitra taona maro ny fananganana orinasa iray fantsona fizarana Ampio ny vokatra hivezivezy amin’ny fomba tsara indrindra amin’ny mpanjifa. Avy eo, mifototra amin’ny toe-javatra misy ankehitriny ary koa ny fahaiza-mampandroso amin’ny ho avy, ny orinasa dia afaka mamorona fantsona fitsinjarana sahaza ho an’ny tenany, ny orinasa dia afaka mandrindra ny fampandrosoana ny fandraharahana amin’ny alàlan’ireto torolàlana manaraka ireto:
1. Fantaro ny fantsona fizarana mety
Mila mahatakatra ny orinasa Inona no toetran’ny fantsona fizarana?
Mila hamaritana hoe fantsona inona no mety amin’ny vokatrao?
Afaka mivarotra vokatra mivantana amin’ny mpanjifa na amin’ny mpivarotra ambongadiny sy mpaninjara ve ny orinasa?
Ity dia fanontaniana manan-danja izay misy fiantraikany amin’ny tombontsoa ary koa ny safidio ny fantsona fizarana tsara for Business. Amin’ny toe-javatra sasany, dia mbola ny tena tombony ho an’ny mpanamboatra ny mivarotra vokatra mivantana amin’ny mpanjifa, satria ny lava kokoa ny fantsona fizarana, dia ambany ny tombony. Ny safidin’ny fantsona fizarana mivantana na ankolaka dia miankina amin’ny fepetra takian’ny fampiroboroboana ny vokatra ho an’ny mpanjifa. Noho izany, ny orinasa dia mila miorina amin’ny toe-javatra misy ankehitriny ary koa ny fironana amin’ny fampandrosoana ho an’ny ho avy mba hahazoana ny safidy tsara indrindra.
2. Famakafakana ny mety ho mpanjifa
Ny filan’ny mpanjifa amin’ny vokatra dia mihamiova araka ny fironan’ny fotoana, mitaky ny orinasa hanaraka akaiky ny tsena mba hahazoana haingana ny filan’ny mpanjifa. Impiry idiran’ny mpanjifa ny vokatrao? Ny fisamborana ny psikolojia mpanjifa dia ho teboka matanjaka hanampy ny orinasa hanitatra ny tsena. Fantsona fizarana Samy manana ny tombony sy ny fatiantoka samihafa, ny fantsona fizarana mivantana dia haingana sy mora atao, mampihena ny vidin’ny mivezivezy sy ny fanjifana vokatra. Saingy misy mpanjifa bebe kokoa hidirana, fihodinam-bola haingana kokoa, fanoherana ny risika ary ny fampitomboana ny tsena. Noho izany, ny famakafakana ny tombony sy ny tsy fahampian’ny mpanjifanao dia manampy anao hisafidy ny fantsona fizarana tsara indrindra ho an’ny orinasanao.
READ Phân quyền là gì? Một số mô hình phân quyền phổ biến | Anybook.vn
3. Tombanana ny fahombiazan’ny asa ary ampifanaraho haingana amin’ny fiovana
Satria tsy mitovy ny fomba fiasa ny fahombiazan’ny fantsona fizarana tsirairay Hafa ihany koa ny fanaterana, ny fantsona sasany dia hiasa tsara kokoa noho ny hafa. Noho izany, ny fampitahana sy fanombanana ny fahombiazan’ny fantsona tsirairay dia tena zava-dehibe mba hanatsarana ny paikadinao. Mba hitazonana ny fifandraisana matanjaka eo amin’ny mpamokatra sy ny mpanjifa fantsona fizarana, Ny orinasa dia mila manao fanadihadiana tsindraindray mba hijerena ny fahafaham-pon’ny mpanjifa sy ny mpiara-miombon’antoka na ny orinasa amin’ny fampiasana maodely tombombarotra stratejika, amin’ny fanaovana ny ankamaroan’ny fanehoan-kevitra ho toy ny fifandraisana amin’ny orinasa.
Satria ny fomba fiasa dia tsy mitovy, ny fahombiazan’ny tsirairay fantsona fizarana hafa koa ny mitondra
Ankoatr’izay dia manara-maso tsy tapaka ireo tondro manan-danja amin’ny fampandehanana ara-bola ny fantsona, mandinika ny asan’ny mpanelanelana ao amin’ny fantsona. fantsona fizarana vokatra mba hanombanana raha tena mandaitra ny fandidiana na tsia. Fanampin’izany, ny fanombanana tsy tapaka ny asan’ny mpikambana amin’ny alàlan’ny fenitra toy ny vola miditra amin’ny varotra, ny fikarakarana ny entana simba, ny dokam-barotra momba ny vokatra ary ny serivisy fanohanana ny mpanjifa. Ireo tondro ireo, rehefa atambatra, dia hamorona sary feno momba ny paikady, ka hanampy ireo orinasa hanatsara tsikelikely ny paikadin’ny fampandrosoana.
Jereo koa: Fampiharana lehibe ny ambaratongan’ny filan’ny Maslow amin’ny Marketing
SATRIA. Ahoana no hamantarana sy hifidianana ny fantsona fivarotana tsara?
Ny zava-misy dia tsy ny modely fizarana rehetra dia miasa tsara amin’ny vokatra, entana, na serivisy rehetra. Ny fantsona tsirairay dia hifanaraka amin’ny iraka ankapoben’ny orinasa sy ny vina stratejika, anisan’izany ny tanjon’ny varotra.
Ny fomba fitsinjarana dia tsy maintsy manome lanja ny mpanjifa. Te hiresaka amin’ilay mivarotra ny vokatra ve ny mpanjifa? Te hotsapaina sy ho voavaha ve izy ireo alohan’ny hividianana? Sa te-hividy mora amin’ny sehatra an-tserasera ny mpanjifa?
Ny fametrahana sy famaliana fanontaniana dia hanampy ny orinasa hamantatra ny safidin’ny fantsona fitsinjarana tsara. Manaraka izany, mila mandinika ny haingan’ny vokatra azon’ny mpanjifa ny orinasa. Ny vokatra sasany dia tsy maintsy omena haingana araka izay tratra amin’ny alàlan’ny fantsom-pivarotana mivantana toy ny vokatra vaovao, hena, trondro, sakafo, sns.
Fanampin’izay, mandinika ihany koa ny orinasa rehefa misafidy fantsona fivarotana maro samihafa. Ohatra, ny fivarotana vokatra an-tserasera sy ny fivarotana amin’ny alàlan’ny fantsona antsinjarany dia tsy maintsy misoroka ny fifandirana amin’ny vidiny sy ny fampiroboroboana eo amin’ny fantsona.
Jereo koa: TOP 13 fiantraikany ara-tsaina malaza amin’ny varotra – varotra
VII. Eo am-pamaranana
Mamintina, fantsona fizarana dia fanalahidy manan-danja ho an’ny fandraharahana mba hiroborobo sy hahatratra fahombiazana be. Amin’izay fotoana izay ihany koa, io no loharano lehibe indrindra avy any ivelany hitondra ny vokatra avy amin’ny orinasa amin’ny mpanjifa amin’ny fomba haingana sy mora indrindra. Ho an’ny tsena iray izay ilain’ny mpanjifa dia miova tsy tapaka araka ny fironana ara-tsosialy, ilaina ny fampitahana tsy tapaka, ny fanombanana ary ny fahafantarana ny tsiron’ny mpanjifa eny an-tsena ny orinasa, ka manova ny paikadin’ny fantsona.
Previous: Muốn làm ca sĩ thì thi vào trường nào | Anybook.vn
Next: Những câu trích dẫn sách hay nhất của Lư Tư Hạo | Anybook.vn